Rotary Anosy sy Baolai : nahazo fitaovam-pianarana sy lavadrano i Iharamy | NewsMada
Rotary Anosy sy Baolai : nahazo fitaovam-pianarana sy lavadrano i Iharamy
Notanterahina, ny faran’ny herinandro lasa teo, ny fitokanana ny village vitrine tao amin’ ny tanànan’ Iharamy, kaominina Ambohimanambola, distrika Avaradrano. Nisy ny tetikasa niarahan’ny fikambanana Rotary Club Anosy sy ny orinasa Baolai teny anivon’ny kaominina Ambohimanambola. Nizara fitaovam-pianarana ho an’ ny mpianatra 240 avy ao amin’ ny Epp Iharamy sy Andramanonga izy ireo. Nahitana kitapo, kahie, fitsipika… ny fitaovana. Ankoatra izay, nahazo lavadrano enina ihany koa ny mponina ao amin’ny tanàna samihafa ao amin’ny kaominina Ambohimanambola. Manana fokontany 10 ny kaominina.
« Efa ela ny tenako no nanao asa soa toy izao niaraka tamin’ ny fikambanana samihafa. Hanamarihana ny faha-20 taona niorenan’ ny orinasa tantanako ny fanohanana ny tetikasa niarahana amin’ny Rotary Anosy. Adidy ny fanampiana ireo mpiara-belona sahirana”, hoy ny filoha tale jeneralin’ny orinasa Baolai, Ren Yu Jie. Nikarakara fifaninanana sary ho an’ ny mpianatry ny EPP 2 voalaza ny Rotary Anosy. Notanterahina tamin’ io andro ihany koa ny fizarana loka toy ny medaly sy valisoa ho an’ ireo mpianatra telo mendrika avy amin’ny Rotary Anosy, Rotaract Ankoay ary ny 4S.
« Vinan’ ny filoha ny fikambanana amin’ izao fotoana izao ny village vitrine izay tanjon’ ny Rotary Anosy. Nanome fitaovana sy fanofanana ho an’ ireo vehivavy eto amin’ ny tanànan’i Iharamy ny 4S satria hoavin’ ny firenena ny zaza sy ny vehivavy”, hoy ny filohan’ ny Rotary Anosy, Rakotonavahy Donatella. Ilaina ny fifanoloran-tanana toy izao eo anivon’ ny fiarahamonina eto amintsika.